ဘာသာကြီးများ၏ အယူဝါဒနှင့် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ဘာသာကြီးများ၏ အယူဝါဒနှင့် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ	December 10, 2009
4 Responses to “ဘာသာကြီးများ၏ အယူဝါဒနှင့် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ”
ယေရှုခရစ်သည် ပြောသည့်အတိုင်း ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သူသည် ဘုရားဂတိပြုထားခဲ့သော ကယ်တင်ရှင် အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ သူနှင့် သူ၏စကား သွန်သင်ချက်များသည် စိတ်ချထိုက်သည်။ ယခု ဘ၀နှင့် တမလွန် ဘ၀ အတွက် စိတ်ချမှုကို ပေးနိုင်ပါငည်။
” ယေရှုကြွလာစဉ်ဂျူးတို့က သူတို့ကို ရောမတို့၏ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခံဘဝမှ ကယ်တင်မည့်အရှင်နှင့်သူရဲကောင်းဟု ထင်ခဲ့ သော်လည်း ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်းသိမြင် လာသောအခါ”သခင်ယေ၇ှုကဘာများလုပ်မိလို့သူတို့ကဘာလို့အဲ့လိုထင်သွားတာလဲနော်???
ဘယ်လိုများ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသလဲ၊ သမိုင်းမှာ အကြီးကျယ်ဆုံးသော ရှင်ပြန်ထမြောက်မှုကို မြင်တဲ့သိတဲ့သူကြတော့ မရှိပါလား၊ ဘာတဲ့…. ငါးရာမကသော ညီအစ်ကိုများ ဟုတ်လား…. ဘယ်သူတွေလဲ မပြောနိုင်ကြပါလား… ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကြမှ တစ်ဆိုသလိုပေါ့… ပြောကြပါအုံးဗျ….. တမန်တော်တွေ မြင်တာတေ့ မပြောနဲ့နော်… ဟဲဟဲ သူ့လူတွေဗျ….